Fanalefahana endri-tsoratra sy qtgtkstyle Opensuse 12.3 | Avy amin'ny Linux
pandev92 | | Fitsinjarana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Azo antoka fa mihoatra ny iray ny olona efa niaina, fa ao amin'ny distros no deb, amin'ny ankapobeny ny famolavolana endri-tsoratra dia ratsy, raha oharina amin'ny ubuntu.
Tsy misy ankanavaka i Opensuse, noho izany dia nanomboka nitady kely ny vahaolana momba ilay olana aho, ary taorian'ny fikarohana nandritra ny adiny roa dia hitako.
Ampianay amin'ny alàlan'ny yast io trano fitahirizana io:
Avy eo mankany Yast isika, mikaroka ao amin'ity trano fitahirizana ity ary mametraka ireo fonosany rehetra.
Mandeha miverina yast indray izahay ary mametraka infinality fontconfig.
Raha vantany vao tafapetraka ny fonosana, dia hamboarintsika ny fametahana endri-tsoratra infinality, izay amin'ny alàlan'ny default dia misy ny fanamafisana karazana ubuntu, izay tsy tiako loatra. Manokatra terminal ianao ary manoratra hoe:
Ao anatin'ilay antontan-taratasy izahay dia mitady ilay andalana milaza hoe "USE_STYLE = »UBUNTU»" Ary ovainay ny teny ubuntu, ho "FAHAMARINANA", Tadidio fa afaka misafidy ny preset an'ny windows 7, osx, chrome os sns ianao.
Amin'ny maha endri-tsoratra tsy fampiasa an'ny rafitra ity dia aleoko manohy mampiasa cantarell avy amin'ny gnome, satria mahafinaritra ny mamaky.
Vita isika, fa izao kosa dia ho tsapantsika fa rehefa manokatra rindranasa qt dia tsy mila ny karazana font infinality ary ny menus dia hita amin'ny refy goavambe.
Ka manoratra amin'ny terminal izahay
Raha tena vita isika, ary hanana ny fisehoan'io karazana io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fanalefahana endri-tsoratra sy qtgtkstyle Opensuse 12.3
Hadinoko ny nametraka ny loharano:
Efa ampiako amin'ny lahatsoratra io ..
Izaho irery ve no tsy manelingelina an'izany?
Tsy dia hitako ny mahasamihafa azy, angamba satria tsy mahita aho, dia ankasitrahana ihany.
tsy manelingelina ahy izany. Fa amin'ny toe-javatra inona no misy ifandraisany amin'ny famolavolana endri-tsoratra?
Izany no hevitry ny tsirairay, fantatro amin'ny olona fa toa ratsy kokoa sy tsy dia boribory ny loharanom-baovao, arakaraka ny itiavany azy ireo, fa ny ankamaroany tsy. Ny fanalefahana endri-tsoratra, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia manampy amin'ny fahadiovan'ny vakiteny, ary singa iray manintona ihany koa, toy ny mahita vehivavy tsy misy makiazy ary avy eo mahita azy noforonina xD, vehivavy foana izy io, fa amin'ny ankapobeny kosa faharoa. tranga toa tsara kokoa ry zareo ahhaaha.
Ity dia iray amin'ireo zavatra izay, tsy takatry ny saina, dia manohy manararaotra be ny sisa i Ubuntu; mijery Windows ianao, mijery MacOS na mijery Ubuntu ary mahafinaritra ny mandany ora vitsivitsy eo alohan'ny PC-nao. Ny distro hafa (manazava izany amiko) dia tena tsara…. Saingy tsy maintsy mizaha ity karazana zavatra ity ianao ary indraindray tsy mahazo izay tadiavinao: fa ny zavatra, sary masina ary endritsoratra dia toa tsara ... ary amin'ny efijery tsara, voafaritra tsara sy voafaritra tsara.
Tokony holazaiko aminao fa miombon-kevitra aminao aho, satria matetika ny singa EyeCandy no raisina fa tsy ny kalitaon'ny rindrambaiko nanaovana azy (ekeko fa mahay manintona mpampiasa vaovao i Ubuntu, saingy tokony hamboly azy ireo izany mba hahafantaran'izy ireo ny fampiasana ny sehatra tsara kokoa. mba hanatsarana ny kalitaon'ny distro).
Na izany na tsy izany, mbola faly aho tamin'ny fandraisana anjaran'i Ubuntu amin'ny fitondrana mpampiasa vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux, satria ny distro hafa dia te hanao toy izany koa, saingy tsy afaka noho ny foto-kevitr'izy ireo (manome ny fahatsapana ho ao anatin'ny vondrom-piarahamonina fanboy aza izy ireo ).
Tuto mahafinaritra, fa raha ny tena marina, ny fanoherana ny alàlan'ny OpenSUSE dia tsy dia misy fahasamihafana raha oharina amin'i Debian sy ny derivatives (ny "ClearType" dia maranitra kokoa ary azo vakiana noho ny M $ an'ny Windows).
Ankoatr'izay, taiza no nahazoanao an'io sary an-tsary io? Toa tsara be.
eliotime3000, satria tsy azoko ny zava-nisy teo amin'ny tontolo iainana alohan'ny fampiharana ny famolavolana, fa tonga aho, kilometatra io, izay nananany tao ubuntu / kubuntu na chakra aza, mazava ho azy fa mitovy amin'ny haavon'ny windows io ihany, saingy vantany vao nanokatra ny pejin-tranonkala tamin'ny firefox ianao, dia azonao atao ny milaza fa tsy dia mahazo aina loatra izy ireo raha jerena.
Azoko daholo ny vola avy amin'ny konachan! 🙂
Eny, tsy dia nazava tamiko tsara izany, raha ny fampiharana izay tsy maka ny fanosorana endri-tsoratra dia ny qt na ny tsy qt, heveriko fa ireo no tsy qt, fa ao amin'ilay lahatsoratra dia milaza fa izy ireo no qt.
Te hanandrana aho saingy mampihemotra ahy kely io, satria mampiasa qtcurve amin'ny smaragd aho, ary tena tiako ny bika aman'endriny, izao raha apetrako ny famolavolana dia takatro fa tsy maintsy manana fampiharana maromaro miaraka amina lohahevitra adwaita na gtk hafa an-keriny izany no mahatonga ahy hisalasala.
amin'ny akorandriaka gnome, ireo izay tsy mandray ny anti-aliasing, rehefa ampiharina, dia ny qt, izany no antony tsy maintsy hanaovanao ilay baiko ese an'ny gconftool, fiarahabana.
Saingy, misaotra pandev92, ny hadisoako dia tsy tsikaritro fa akorandriaka io (ary novakiako ilay akoranao gnome shell, hehe), manontany tena aho raha toa ka ny mifanohitra amin'izay dia manana olana mitovy amin'ny kde aho fa ny gtk dia tsy milamina, tena mahaliana misaotra 🙂
Tsia, ny anti-aliasing dia mamadika azy fotsiny, tsy misy olana :), koa raha tsy misy anti-aliasing dia ratsy kokoa noho izany ny endritsoratra ao kde, noho izany dia manoro hevitra anao aho mba hampihatra azy.
Eny, tsy misy tokony hampihatra azy amin'ny kde hahitana ny tsy fitovizany, raha mbola afaka miverina ianao.
Misaotra betsaka fa hanandrana aho
Fitsapana ny xD mpampiasa ahy
Hadinonao ny nanazava fa ho an'ny Gnome izy io, satria ao amin'ny font KDE dia alefa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny default.
Nanandrana kde aho, ary mahatsiravina ny loharanom-baovao, raha mijery ilay lahatsoratra azoko ianao dia ho hitanao fa nampiasa kde ilay bandy ...
Ny fanontaniako dia: inona no ifandraisan'ny famolavolana endri-tsoratra amin'ny karazana fonosana ampiasain'ny fizarana?
Misaotra tamin'ny famerenako ho an'ny openuse.
Zahao ihany koa ny forum Infinality, izay manazava dingana fanampiny hanamboarana azy tsara
Drafitra ho an'ny lahateliko ao amin'ny FLISOL
KDE: tongasoa eto amin'ny birao semantika (fizarana 5)